Madaxweyne Farmaajo oo ku booqday Isbitaalka Yardimeli qoyska Weriye ka tirsanaa Ciidamada - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweyne Farmaajo oo ku booqday Isbitaalka Yardimeli qoyska Weriye ka tirsanaa Ciidamada
Madaxweyne Farmaajo oo ku booqday Isbitaalka Yardimeli qoyska Weriye ka tirsanaa Ciidamada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cisbitaalka Yardimeli ee magaalada Muqdisho ku booqday qoyska uu ka tagay -Alle ha u naxariistee- Shahiid Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee labo wiil oo mataanaha ah oo cisbitaalkan ay ku dhashay marwada marxuumka ayaa sheegay in dowladdu ay dammaanad qaadeyso nolosha ubadkan, maadaama Aabahood uu u shahiiday dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
“Alle ha u naxariistee marxuum Cabdinaasir Gacal waxa uu naftiisa u hibeeyay difaaca dalkiisa iyo dadkiisa, isagoo xirfaddiisa wariyenimo la garab taagnaa halyeeyada kale ee Ciidamada Qalabka Sida ee safka hore kaga jira furimaha dagaalka”.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in marxuumku nolosha caadiga ah ee dhiggiisa wariyeyaasha ka howl-gala gudaha dalka uu ka doorbiday in uu qalabkiisa iyo aqoontiisa geliyey sidii uu kaalin uga qaadan lahaa dib u xoreynta dalka, isaga oo muraayad u noqday guulaha geesiyaasheenna Ciidanka Qalabka Sida ay ka soo hoynayeen argagixisada Alshabaab.
Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa booqday qaar ka mid ah bukaannada ku jira cusbitaalka Yardimeli, waxa uuna warbixinno ku saabsan xaaladdooda caafimaad ka dhageystay dhakhaatiirta dabiibeysa iyo Agaasimaha cusbitaalka Mudane Ibraahim Maxamed Xasan.
Madaxweyne farmaajo oo booqday isbitaalka Yerdimeli
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Agaasimaha hay’ada socdaalka iyo jinsiyadaha
Is-afgaradka wadashaqaynta W/Caddaaladda KGS iyo Barnaamijka Balaarinta Adeega Marin U Helida Cadaaladda
Guddiga Madaxabanaan ee Dib u heshiisiinta Qaran oo soo dhoweeyay heshiiska Doorashooyinka